I-Pacman, i-Emulator, kwi-Intanethi ▷ 🥇
Pacman: indlela yokudlala inyathelo ngenyathelo
Ukudlala ikayiti kwi-intanethi simahla, kufuneka nje landela le miyalelo inyathelo ngenyathelo:
Vula isikhangeli sakho osithandayo kwaye uye kwindawo yomdlalo Isiphelo sendlela.
Nje ukuba ungene kwisiza, umdlalo uza kuboniswa kwiscreen. Kuya kufuneka kuphela ukudlala umdlalo kwaye ngoku ungaqala ukukhetha ubumbeko oluthandayo. Nje ukuba uphumelele umdlalo unganyusa umgangatho. Kukho amanqanaba angamashumi amabini anesine ewonke.
Ngoku, uya kufumana amaqhosha aluncedo. Ngaba "Yongeza okanye susa isandi", Nika iqhosha"umdlalo"Kwaye uqale ukudlala, unga"Nqumama"kwaye"Qalisa kwakhona"Nangaliphi ixesha.
Uyakwazi ukutya iilekese ngaphandle kokutyiwa.
Emva kokugcwalisa umdlalo, cofa "Phinda Uqalele" ukuqala ngokutsha.
I-Pac-Man luphawu lomdlalo oluthandwayo oluvela kwii-XNUMXs. Ngaba thaca kwiplanethi kwimidlalo yevidiyo kwilizwe laseJapan ngoMeyi 1980, XNUMX. Umdlalo wafika kwi-US kwiinyanga ezi-5 kamva kwaye wafikelela ngokukhawuleza kwiikopi ezingama-000 ezazithengisiwe.
Ngaphandle kwenguqu ye-arcade, iPac-Man ikwenzelwe ne-XNUMX Atari. Kule minyaka idlulileyo, umdlalo ufumene uninzi kunye neenguqulelo ezihlaziyiweyo zezona Consoles zangoku. E-Brazil, umlinganiswa owabizwa ngokuba ngu-Come-Come naye waba yimpumelelo.
Ngaphezulu kwento nganye, uluvo lomdlalo yayikukujonga umlinganiswa otyheli otya iitafile kwimaze. Kwangelo xesha, umdlali kufuneka abaleke kwiimbonakalo ezi-4 ezizama ukumoyisa.
UNamco wayefuna ixesha elahlukileyo kwimidlalo yokudubula, ngazwi linye ngelo xesha. Ekuqaleni, u-Iwatami wafumanisa ukuba wayenenkuthazo yomlinganiswa ngokubona ipitsa ngaphandle kwesilayidi.
Nangona kunjalo, imvelaphi yomlinganiswa ikwanazo nezinye iinguqulelo. Ngokuka-Iwatami ngokwakhe, imbonakalo ye Ikhayithi yaphefumlelwa ngumbhalo waseJapan wegama elithi "kuchi", umlomo.
Kwakamsinya nje ukuba yenziwe, umlinganiswa wayesaziwa njenge Ikhayithi. NgesiJapan, upelo lwepuck kunye ne-pac luyafana ngokufanayo, paku. Ngokwentsomi yeli lizwe, kwakusaziwa ukuba uPaku unomdla omkhulu. Ukongeza koku, igama lisebenza njenge-onomatopoeia ukuvula nokuvala umlomo xa usitya.
Kwelinye icala, igama elithi Puck livakala kakhulu njenge taco ngesiNgesi. Ke xa umdlalo waziswa e-US, uNamco wakhetha ukuyibiza ngokuba yiPac-Man.
Nangona yaqaliswa okokuqala eJapan, yayikukufika e-US ishiye uphawu lwayo kwinkcubeko ye pop. Impumelelo yomdlalo ibimangalisa kangangokuba nje Ishumi leminyaka lokupapasha laqokelela ibhiliyoni yeedola, kumagumbi omdlalo kuphela e-US.
Kule minyaka ilishumi izayo, ixabiso liphindwe kabini, lifikelela kwi-US $ 500 yezigidigidi. Namhlanje, i-franchise iqokelele phantse iibhiliyoni ezilishumi elinesithathu kwihlabathi liphela. Oku kuthetha ukuba ugqitywe kuphela ngabahlaseli bendawo (malunga neshumi elinesine leebhiliyoni zeedola zaseMelika) kuluhlu lwezona zinenzuzo enkulu kwiplanethi.
Ukusukela kwinguqulelo yokuqala kwii-arcade, iPac-Man iphumelele ngaphezulu kwama-sequels angamashumi amathathu. Umlingiswa usenza ukubonakala kwimidlalo eya ngaphaya kwe-franchise yakhe. Kwi-Super Smash Bros, ukuba ngumzekelo, ibhola etyheli inokukhethwa njengomnye wabalwi.
Ikhayithi ngumdlalo we-elektroniki owenziwe Tōru Iwatani kwinkampani Namco. Ekuqaleni yaveliswa nge-Arcade kwiminyaka yoo-80, yaba yeyona midlalo idumileyo neyadlalwayo namhlanje, kunye neenguqulelo zala maxesha zokududuzela kunye nokulandelelana kwabanye abaninzi.
Ngumdlalo olula kakhulu: umdlali wayengu- Intloko ejikeleze ngomlomo evula kwaye ivale, isetelwe kumgaqo olula ozaliswe ngamacwecwe kunye ii-specter ezine ezamtshutshisayo. Injongo yayikukuba yitya ithebhulethi nganye ngaphandle kokubethwa ziziporho, kwinqanaba eliqhubekayo lokuntsokotha.
I-Pac-Man ngomnye wabalinganiswa abathandwa kakhulu nabaziwayo kwimidlalo yevidiyo yomdlalo wee-XNUMX. Ubungqina boku kuthandwa kwayo naphakathi kwabona bancinci, abangakhange badlale nemidlalo yabo.
Kwaye ukuba ungumntu othanda lo mlinganiswa mncinci utyheli, jonga i-trivia enomdla malunga nelungelo lakhe lokuthengisa.
Injongo yomdlalo yitya nganye yeetayile ze-maze ngaphandle kokubethwa ziziporho. Xa ungqubana nethebhulethi, ifayile ye- Ikhayithi iginye kwaye kufuneka inyamalale kwi-labyrinth. Ukuba umdlali utya itayile nganye kwimephu, umdlali uyadlula kwinqanaba. Ukuba umdlali utya nganye nganye kwiithayile kwindawo nganye yasimahla, uphumelele umdlalo.
Iintshukumo ezilawulwa kuphela ngumsebenzisi zezi Ukuhamba ngezitshixo zendlela ejonge phambili, ubuso ngasemva, ekhohlo nasekunene, ngenjongo yokuphepha ukubukela kunye nokutya iipilisi ezisasazeke kwilabyrinth.
Xa i-specter ingqubana nayo Ikhayithi uyafa, ngaloo ndlela aphulukane nobomi. Umdlali unobomi obongezelelweyo obongezelelweyo, eziboniswe kwibar esezantsi kwesikrini. Xa uphulukana nobomi kwaye usebenzisa obunye ubomi, inani leepilisi ezisele kwinqanaba alisaguquki ukusukela ngexesha lokufa Ikhayithi, wonke umntu ubuyela kwimeko yokuqala yesigaba.
Kwimeko enjalo, ukugcwalisa inqanaba (okanye umdlalo), umdlali kuphela kufuneka ukhathazeke malunga neepilisi ezisele. Xa umdlali ephulukana nobomi bakhe ngokungqubana nababukeli, baphulukana nomdlalo.
Isantya somboniso kunye Ikhayithi iyafana, kodwa, njengakumdlalo wokuqala, iipilisi ezinkulu zacothisa umba wepesenti kwaye zikwavumela Pacman wabadla.
Xa zityiwe, kushiyeka kuphela "umoya wesiporho", ekufuneka ubuyele embindini we-labyrinth, apho iintsalela ze-specter ziphinda zibe sisibhengezo esiya kuphinda sikhathaze Pacman. Kwinqanaba ngalinye kwaye kukho iipilisi ezine eziphezulu. Umphuhlisi unquma ukuba iipilisi ezinkulu ziya kuhlala ixesha elingakanani.
Ithebhulethi nganye eqwetyiweyo inexabiso lamanqaku alishumi, ithebhulethi nganye eqwengiweyo inexabiso lamanqaku alikhulu, kwaye nganye ityibilikisiweyo ixabise amanqaku angamakhulu amabini. Umdlalo kufuneka uhlale ubuncinci kwizigaba ezi-2.
Xa wayesenza umdlalo, uToru Iwatani wayefuna ukutsala ababukeli ababhinqileyo kwifomathi enobundlobongela kunye nobundlobongela. Ngaphandle koku, amagumbi omdlalo aqhubekile ukuba ikakhulu ngamadoda. Ke ngoko, umphuhlisi kufuneka enze enye indlela entsha.
Nangona kunjalo, isisombululo saphalala ngokungalindelekanga. Impumelelo yePac-Man ikhuthaze ukuyilwa komdlalo uCrazy Otto. Ngomdlalo weqonga ofanayo kunye nohlobo lowasetyhini lomntu obalaseleyo, umdlalo wawungekho kunxibelelwano noNamco.
Ke, Midway, ngubani onamalungelo ePac-Man eMelika, wagqiba ukuthenga uCrazy Otto kwaye wayikhulula phantsi kwegama UNks Pac-Man. Umdlalo uzise izinto ezintsha ezinje ngemazes ezintsha kunye nesantya esingaphezulu.
Kungekudala emva kwempumelelo kwimidlalo, i-franchise yafumana amandla kwezinye iindaba. Kwiminyaka elishumi elinesithoba anamashumi asibhozo anesibini, umlinganiswa waphumelela kuhlobo kuthotho loopopayi olubizwa ngokuba Umkhuhlane we-Pac-man. Uyilo luveliswe nguHanna-Barbera, onoxanduva lweempawu zesintu ezinje ngeFlintstones kunye neeJetsons.
Ukongeza koku, umlinganiswa yaba sisilwanyana sokuqala se- imidlalo yevidiyo. Oko yabonakala okokuqala, ineemveliso ezinophawu olunje ngoonodoli, izikipa, oobhaka kunye nezinye ezininzi. Ngokukhawuleza yaba lelinye lawona magama omdlalo abonakalayo ngaphandle kweendaba.
Okokugqibela, iimpembelelo zayo kwiplanethi yemidlalo yile yokuba nababhali be-GTA bathe umdlalo ufana Ikhayithi. Ngokwababhekisi phambili, imidlalo emi-2 imalunga nomlinganiswa ohambela phambili kwimaphu (abahamba ngeenyawo / iipilisi) ngelixa eleqwa ngabachasi bakhe (amapolisa / iziporho).
Iinyani eziqinisekileyo malunga nePac-Man
Umdlalo wokuqala, ukusuka kwishumi elinesithoba elinamashumi asibhozo, yenye yeshumi elinesine eyinxalenye yokudityaniswa kwemidlalo ukusuka IMyuziyam yesiXeko saseNew York yoBugcisa baNgoku.
I-Pac-Man yayingumdlalo wokuqala ukubandakanya oomatshini bamandla okwethutyana kusetyenziswa into ethile. Umbono uphefumlelwe bubuhlobo bukaPopeye nesipinatshi.
Ngamnye wabachasi kumdlalo unobuntu obahlukileyo. Oku kuyacaca xa sijonga amagama abo ngesiJapan: I-oikake ebomvu (I-Stalker), Machibuse epinki (Ukulalela), I-Kimagure eluhlaza okwesibhakabhaka (Engazinzanga) kunye Otoboke orenji (Isidenge). KwisiNgesi, amagama aguqulelwa njengeBlinky, Pinky, Inky, noClyde.
Nangona umdlalo ungenasiphelo, unokuba nomdlalo ogqibeleleyo. Ihlala ngaphakathi ndigqibe amanqanaba angamakhulu amabini anamashumi amahlanu anesihlanu ngaphandle kokuphulukana nobomi kwaye uqokelele into nganye kumdlalo. Ukongeza koku, nganye nganye kufuneka isetyenziswe ngomsebenzi ngamnye wamandla.
Ukuhlonipha ilungelo lomdlalo, uGoogle ubhale ingxelo edlalwayo yePac-Man kumdlalo weminyaka engama-XNUMX.